सुत्केरी र शिशुको मृत्युसँगै रंगेली अस्पताल तनावपूर्ण - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ६ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १४:०४
विराटनगर ६ फागुन । नवजात शिशु र सुत्केरी महिलाको मृत्यु चिकित्सकको लापरबाहीका कारण भएको भन्दै आफन्त प्रदर्शनमा उत्रिएपछि मोरङको रंगेली नगरपालिका–७ स्थित रंगेली अस्पताल मंगलबार दिउँसो तनावग्रस्त बनेको छ ।
सामान्य प्रसूतिमार्फत छोरा जन्माएकी रंगेली–९ दोहमनाकी २५ वर्षीया रविना सरदार र उनीबाट जन्मिएका नवजात शिशुको सोमबार मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले उग्ररुप लिएको छ । रविनलाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि सोमबार बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बिहान १० बजे सामान्य प्रसूतिमार्फत उनले दोस्रो सन्तानका रुपमा छोरा जन्माइन ।
चिकित्सकको लापरबाहीले आमा र शिशुकै मृत्यु भएको भन्दै आफन्त र परिवारका सदस्यले अस्पताल बाहिर नाराबाजी र प्रदर्शन थालेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो । उनीहरुले सुत्केरी र शिशुको शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । आन्दोलित बनेका आफन्तले मृत्युको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर दोषी चिकित्सकमाथि कारबाही हुनु पर्ने र आगामी दिनमा यस्तो गल्ती दोहोरिन नहुने माग राखेका छन् ।
अस्पतालमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन ठूलो संख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर सुरक्षा व्यस्था कडा पारिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले बताए । नेपाल प्रहरीका डीएसपी मानबहादुर राई र इन्सपेक्टर लेखनाथ दाहाल नेत्रृत्वको अलगअलग टोली प्रदर्शनस्थलमा परिचालित रहेको उहाँको भनाइ छ ।
रविनाका दाजु प्रल्हाद सरदारले प्रसूति व्यथाले च्यापेर भर्ना गरिएको लामो समयसम्म चिकित्सकले वास्ता नगर्दा बहिनी र नवजात शिशु गुमाउनु परेको बताउनुभयो ।
सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रेफर गरिदिनु भन्दा पनि नमानेको उहाँको भनाइ छ । रक्तश्राव नरोकिएर अवस्था गम्भीर बनेपछि बिहान ११ बजे मात्रै उपचार सम्भव भएन भनेर चिकित्सकले सुविधा सम्पन्न असपतालमा रेफर गरिदिएको प्रल्हादले बताए । उनकाअनुसार ढिलो गरेर रेफर गरिदिएपछि रविनालाई विराटनगरको कोशी अस्पताल ल्याइएको थियो ।
कोशीमा पनि उपचार सम्भव नभएपछि नोबेल शिक्षण अस्पताल पुर्याइयो । नोबेल पुर्याएको केही बेरमै सुत्केरीलाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेको प्रल्हादको भनाइ छ । उहाँले जीवितै बच्चा जन्मिएको भए पनि चिकित्सकले मृत जन्मिएको भनेर ढाँटिरहेको बताउनुभयो । ‘चिकित्सकले वास्तै नगरेका कारण जन्मिएको आधा घण्टामा शिशुको मृत्यु भयो,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘अवस्था गम्भीर बनेर गएपछि मात्रै रेफर गरिका कारण सुत्केरी बहिनीलाई पनि बचाउन सकिएन ।’
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. अशोक ठाकुरले सामान्य प्रसूतिमार्फत बच्चा जन्मिए पनि रक्तश्राव अत्याधिक भएर सुत्केरीको मृत्यु भएको बताउनुभयो । ‘जन्मिन साथ परीक्षण गर्दा बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘मृत बच्चा जन्मिएपछि सुरु भएको रक्तश्राव नरोकिएर आमाको पनि मृत्यु भयो ।’
यकिन भइनसके पनि आमाको रक्तचाप कम हुँदै गएका कारण सुरुमै गाह्रो भएकाले जीवित बच्चा जन्म नसकेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
डा. ठाकुरले सुत्केरीको मृत्यु चैं ‘पोस्टपार्टन ह्याम्रेज’ का कारण भएको बताए । उनकाअनुसार बच्चा जन्मिएपछि पाठेघरबाट पाँच सय मिलिलिटर भन्दा पनि रगत बग्नुलाई ‘पोस्टपार्टन ह्याम्रेज’ भनिन्छ । उनले बच्चा जन्माउने क्रममा पाठेघर फुटेकाले रक्तश्राव अत्याधिक भएको हुन सक्ने बताउनुभयो ।
‘प्रसूति व्यथाले च्यापेपछि सामान्य अवस्थामै महिलालाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
बच्चा जन्मिएसम्म अवस्था सामान्य नै थियो,’ डा. ठाकुरले, ‘तर अत्याधिक रक्तश्राव हुन थालेपछि औषधि उपचार थालेर रोकथामको प्रयास धेरै गर्दा समेत सम्भव भएन । अवस्था थप गम्भीर बन्दै गएपछि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रेफर गरिए पनि सुत्केरीलाई बचाउन सकिएन ।’ उपचारमा चिकित्सकले कुनै लापरबाही नगरेको बताउँदै शवको पोस्टमार्टम गरेपछि मात्रै मृत्युको सबै कारण खुल्ने जानकारी दिनुभयो ।
समस्या समाधानका लागि भनेर अहिले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठक बसिकेको छ । तर बैठक र छलफलमा बस्न सुत्केरीका आफन्तले भने अस्वीकार गरेका छन् ।
रविनाका श्रीमान मनु सरदार वैदेशिक रोजगारीका लागि एक वर्षदेखि कतारमा छन् । श्रीमतीको मृत्युको खवर सुनेपछि उनी नेपाल फर्किएका छन् । रविना र मनुका पहिलो सन्तान ७ वर्षका छोरा छन् ।
अपराधमा संलग्न भारतीय पक्राउ गर्न सकस
विराटनगर, २८ भदौ । प्रदेश १ मा आज ४६ संक्रमित थपिएका छन् । मोरङमा ४१,...